A ọhụrụ echiche nke igba egbe bụ nnọọ akpali | Gam akporosis
A ọhụrụ obubata echiche bụ-akpali nnọọ mmasị
Dị ka anyị maara na ị chọrọ ịnwale ngwa ọhụrụ maka gam akporo, ọkachasị ndị na-ebupụta ngwa ngwa! a ọhụrụ obubata echiche m na-eche bụ kemgwucha akpali nakwa na ị ga-enwe mmasị na ya nke ukwuu.
Onye nhazi nke ga-enweghị ọtụtụ ihe dịka ịme ihe ozugbo mgbe ịpị akara ngosi ma ọ bụ ndakọrịta na Akara ngosi, ọ bụ ezie na ọbụlagodi na enweghị nke ahụ, ana m ewere ya dị ka ezigbo echiche, ọfụma na, na-ekwu echiche, a obubata dị iche na ihe anyị na-emebu na akụkụ ndị a. N'ihi ya, m na-adụ gị ọdụ ka ị gaa n'ihu na-agụ akwụkwọ a ka ị mara ihe niile Launcher ọhụrụ a maka gam akporo na-enye anyị, ma karịa ihe niile m na-adụ gị ọdụ ka ịlele vidiyo nke m na-akọwa nke a na ngwa a chọrọ ịnyefe n'ụzọ ọhụụ na na omimi.
Nke mbụ, gwa ha nke ahụ bụ kpam kpam free na ad-free malite. Mwepụta nke ahụ, olee otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, anyị ga - enwe ike ibudata ya na Playlọ Ahịa Google Play, ụlọ ọrụ ngwa ngwa maka gam akporo, naanị site na ịpị igbe m hapụrụ n'okpuru usoro ndị a.
1 Budata ihe ngosi akara ngosi Live maka gam akporo site na Playlọ Ahịa Google
2 Mbido ya na Oyiyi Oyiyi maka gam akporo, usoro ihe eji eme ihe bu ihe na-adi nma
3 Ihe arụmọrụ niile nke Launcher nyere na Ihe Oyiyi Live maka gam akporo
Budata ihe ngosi akara ngosi Live maka gam akporo site na Playlọ Ahịa Google
Live Icon malite na maka gam akporo
Mbido ya na Oyiyi Oyiyi maka gam akporo, usoro ihe eji eme ihe bu ihe na-adi nma
Agbanyeghi na ihe akpọsa banyere ihe nyocha nke gam akporo a site na ndị mmepe nke ngwa a bụ nsonaazụ mmegharị nke Oyiyi, enwere m ike ịgwa gị na nke a abụghị ihe niile anyị nwere ike ịchọta na nke a. Ihe ntanye nke m na-emeghachi dị m ka ihe na-atọ m ụtọ site na echiche ọ bụ ezie na enweghị ụfọdụ nhọrọ nhazi ahazi dị ka ihe m gwara gị gbasara enweghị ndakọrịta maka ngwugwu Icon ma ọ bụ enweghị omume igosipụta ngwa ngwa mgbe ịpịrị akara ngosi.
Mgbe ahụ, m ga-ahapụrụ gị dịka ndepụta ihe niile ọrụ nyocha ọhụrụ a na-enye anyị, arụmọrụ m kọwapụtara n'ụzọ zuru ezu na vidiyo agbakwunyere nke m hapụrụ na mbido otu ọkwa a.
Ihe arụmọrụ niile nke Launcher nyere na Ihe Oyiyi Live maka gam akporo
Launcher dị oke nfe, ọ dị obere ma buru 7 Mb mgbe ebudatara ya ma ozugbo ahazi ya ọ ga-erughị 40 Mb na sistemụ ahụ.
Ezigbo maka ọnụ nke oghere niile ọ bụ ezie na ọ kachasị maka ọnụ ala dị ala.
Nnukwu nhọrọ nke na akwụkwọ ahụ aja dị site na edemede.
N’ezie akara ngosi dị ndụ na-agagharị na desktọọpụ gị na drawer ngwa yana enwere ike ịhazi ha ka ha kwaga mgbe niile, ma ọ bụ mgbe ị nwetara ozi sitere na ngwa ahụ.
Igbe drawer na ndepụta ma ọ bụ ọnọdụ ntanetị
Ngwa ngwa ngwa.
Desktop wijetị na-agụnye anọ dị ukwuu atụmatụ: Search, Utility na Ndi ana-akpo ngwa.
Nkọwa nkenke banyere oriri batrị: ụgwọ ọkwa, oge fọdụrụ na okpomọkụ.
Ozi nkenke banyere RAM eji na ikike nke nchekwa dị n'ime na-egosi ngụkọta ya na ihe anyị nwere.
Otu-pịa akara nke na-akpụ akpụ Icon animations.
Ekwe omume nke importing na desktọọpụ nhazi gị aga obubata.
Nweta okporo ụzọ ozugbo.
Direct uzo a Mirror mode na ngwa ngwa na-enyere n'ihu igwefoto nke anyị gam akporo na a sere n'elu window.
Ohere nke na-agbakwunye ọkacha mmasị kọntaktị.
Ndi ana-akpo interface na-egosi ozi kọntaktị na a nnọọ visual ụzọ, nke na-agụnye a ọrụ ịgbanwe ahaziri ụdaolu na ọbụna ịkọrọ kọntaktị site na ihe e kere eke nke a QR code.
Nhọrọ ngwa egwu kachasị mma.
Nhọrọ nke na-egosi ngwa kachasị eji.
Kedu ka m ga-esi gwa gị Ebumnuche nke mwepụta nke gam akporo na m hụrụ onwe m nke ukwuu, na-atọ ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » A ọhụrụ obubata echiche bụ-akpali nnọọ mmasị